Ọkachamara Semalt: Anya Na-ahụ Anya n'ime Ihe Ngwá Ọrụ Hackers
Ozugbo ndị na-agba ọsọ na-amụta ụzọ ha ga-esi gbagoo otu nzukọ, ha ga-eji ya na-abanye na haahụmahụ na ihe ịga nke ọma gara aga. Ya mere, ịgbalị ịghọta ihe ọ bụla data nwere ike igosi na ọ bara uru dị ka onye na-abata n'uchenke onye na-awakpo ma tụlee ụzọ ha nwere ike isi mee iji merụọ ahụ.
Frank Abagnale, Onye Nlekọta Ndị Nlekọta Ọrụ nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, na-enye ụdị mwakpo kachasị ọnụ nke ndị omempụ na-ejikarị eme ihe:
Malware na - ezo aka na mmemme nke mmemme dịka nje na ransomwarenke na-enye ndị na-ebute mgbochi - all-in-one mobility in portland oregon. Ozugbo ọ na-enweta ntinye n'ime kọmputa, ọ na-eme ka iguzosi ike n'ezi ihe nke kọmputa ghara imebi yaigwe eji. Ọ na-ekpuchikwa ozi niile nke na-abanye ma na-esi na usoro ahụ, yana ihe omume na igodo. N'ọtụtụmgbe ọ bụla, ọ chọrọ ka hacker jiri ụzọ ha nwere ike isi nweta malware ahụ dị ka njikọ, yana ozi nyocha na-adịghị njọMgbakwụnye.
A na-ejikarị emepụta ihe mgbe onye na-eme ihe na-eme onwe ya ka ọ bụrụ onye ọ bụlanzukọ ha tụkwasịrị obi ime ihe ha na-agaghị eme. Ha na-achọ iji ngwa ngwa na email, dị ka ọrụ aghụghọ, na ozi-emgbakwunye. Na nbudata mgbakwunye ahụ, ọ na-ewepụta malware, nke na-ebute onye ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ na-akwadoghị, nke na-aga n'ihuịjụ maka ozi nkeonwe si n'aka onye ọrụ ahụ.
3. Ọnwụ Ngwá Agha SQL
Asụsụ Structured Query bụ asụsụ mmemme, nke na-enyere aka na nkwurịta okwunwere ọdụ data. Ọtụtụ sava na-echekwa ozi nzuzo na ọdụ data ha. Ọ bụrụ na e nwere ọ bụla gaps na koodu isi, onye hacker nwere ike injecta SQL nke onwe ha, nke na-enye ohere ka ha a azụ ụzọ ebe ha nwere ike ịjụ maka nzere si saịtị si ọrụ. Esemokwu ahụ na-aghọ nsogbu karịma ọ bụrụ na saịtị ahụ na-echekwa ihe dị egwu banyere ndị ọrụ ha dị ka ozi ego na ọdụ data ha..
4. Ntugharị Cross-Site Script (XSS)
Ọ na-arụ ọrụ n'otu ụzọ dị ka SQL injections, dị ka ọ injects obi koodu n'ime amkpokọta. Mgbe ndị ọbịa na-abanye na saịtị, koodu ahụ na-etinye onwe ya na ihe nchọgharị nke onye ọrụ ahụ, si otú ahụ na-emetụta ndị ọbịa ahụ kpọmkwem.Ndị na-agba ọkụ na-agba ọsọ na-agba ọsọ ọsọ ma ọ bụ ederede na saịtị iji XSS. Ndị ọrụ nwere ike ọ gaghịdị achọpụta na ndị ọgba ọsọ na-agbagha haozi ruo mgbe oge ruru.
5. Ịjụ Ọrụ (Ọrụ)
Mwakpo KWESỊRỊ gụnyere ịbubata weebụsaịtị ahụ na ọtụtụ okporo ụzọ ruo n'ókè yana-ebudata ihe nkesa na enweghị ike iji ọdịnaya ya nye ndị na-agbalị ịnweta ya. Ụdị okporo ụzọ nke ndị iro hackers bụezubere iji iju mmiri na ebe nrụọrụ weebụ iji mechie ya site na ndi oru. N'ọnọdụ ebe a na-eji kọmputa arụ ọrụ, ọ na-aghọ Nkwekọrịta Kesaranke Nbuso agha (DDoS), na-enye ndị na-awakpo adreesị IP dị iche iche na-arụ ọrụ n'otu oge site na, na-eme ka o sie ike ịchọta ha.
6. Oge Ịgba Ụja na Mmegide Ndị Mmadụ na-akpata
Mmekọrịta azụ na azụ n'etiti kọmputa na sava weebụ dịpụrụ adịpụ ọ bụlanwere NJ ID pụrụ iche. Ozugbo onye na-eme ihe nlekota na-enweta njide nke nnọkọ NJ, ha nwere ike ịrịọ arịrịọ dị ka kọmputa. Ọ na-enye ha ohere inwetantinye iwu na-akwadoghị dịka onye ọrụ na-enweghị atụ iji nweta nchịkwa ozi ha. Ụfọdụ n'ime ụzọ e si eji ID nzuzo eme ihe bụ site naederede site na cross-site.
7. Njiji ihe eji eme ihe
N'ihi ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke weebụsaịtị ndị chọrọ paswọọdụ, ndị ọrụ nwere ike ịhọrọ iji regharịaha okwuntughe maka ebe a nyere. Ndị ọkachamara nchebe nyere ndị mmadụ aka ka ha jiri okwuntughe pụrụ iche mee ihe. Ndị omekome nwere ike nweta aha njirimara na okwuntughema jiri oke agha ike iji nweta ohere. Enwere ndị njikwa okwuntu dị iche iji nyere aka na nzere dị iche iche eji na weebụsaịtị.
Ndị a bụ naanị ole na ole n'ime usoro eji eme ihe site na ndị na-awakpo weebụ. Ha bụ mgbe niileịzụlite ụzọ ọhụrụ na nke ọhụrụ. Otú ọ dị, ịmara bụ otu ụzọ isi eme ka ihe ize ndụ nke ọgụ na ime ka nchekwa dịkwuo elu.